Articles tagged 'sten zvorwadza'
Go hang, Khupe told as Sten Zvorwadza feels betrayed 30 May 2018 HARARE - MDC Youth Assembly vice president Shakespeare Mukoyi said he will not testify against party leader, Nelson Chamisa, in his battle against Thokozani Khupe for the control of the country's biggest opposition party. Mukoyi told the Daily News yesterday that Khupe's camp was lost to think...
Presidential insult rap against Zvorwadza withdrawn 6 January 2018 HARARE - National Vendors' Union of Zimbabwe (Navuz) chairperson Sten Zvorwadza was yesterday freed in a case in which he was accused of undermining the authority of former president Robert Mugabe. Zvorwadza, who was represented by Jeremiah Bamu of Zimbabwe Lawyers for Human Rights, was accuse...
Zvorwadza challenges remand placement 16 December 2017 HARARE - National Vendors Union leader Sten Zvorwadza has challenged his placement on remand in a case in which he is accused of undermining the authority of former president Robert Mugabe after he criticised him for removing vendors from the streets. Zvorwadza's lawyer Jeremiah Bamu said the ...
Zvorwadza removed from remand 28 February 2017 HARARE - National Vendors Union of Zimbabwe (Navuz) leader Sten Zvorwadza was yesterday removed from remand in a case he is alleged to have threatened to burn a local five-star hotel. Zvorwadza was removed from remand by Harare magistrate Victoria Mashamba after considering that the State witn...
Vendors threaten havoc over ban 17 January 2017 HARARE - Vendors have threatened to cause mayhem if the Harare City Council (HCC) goes ahead with plans to forcibly remove them from the streets. In a bid to curb a typhoid outbreak — which has so far claimed two lives — council has banned the sale of cooked and uncooked food while it has also...
Zvorwadza in dramatic court plea 22 November 2016 HARARE - National Vendors Union (Navuz) leader Sten Zvorwadza staged a dramatic plea for a postponement of his cases when he stormed the courtroom with his luggage and an air ticket for a flight that was due to depart at 12pm yesterday. Zvorwadza surprised Harare magistrate Vongai Muchuchuti ...
We don't need police clearance: Protesters 15 November 2016 HARARE - Unrelenting anti-President Robert Mugabe activist Sten Zvorwadza has vowed to stage a demonstration on Friday — with or without police clearance. He said they would not “validate an illegality by seeking clearance from the police to practice their constitutional right”. Section 59 ...
'Zvorwadza has case to answer' 10 November 2016 HARARE - The State yesterday argued that National Vendors Union of Zimbabwe leader, Sten Zvorwadza, has a case to answer on allegations of disorderly conduct emanating from a January 2013 incident. Zvorwadza, 47, of Greystone Park, had applied for discharge at the end of the State's case, argu...
UN pressured over Zim 18 October 2016 HARARE - Pro-democracy activists and opposition political parties have petitioned the United Nations (UN)'s Harare office to withdraw Zimbabwean troops from foreign missions, accusing the country of failing to observe the UN Charter. Led by anti-President Robert Mugabe activist Sten Zvorwadza,...